Gyor, tanànan'ny baroika any Hongria | Vaovao momba ny dia
Gyor, tanànan'ny baroika any Hongria
Fialantsasatra any Eropa | | Hongria
Mifindra isika anio Gyor, tanàna Hongroà tsara tarehy sy mahavariana, ny fahatelo lehibe indrindra ao amin'ny firenena, manodidina ny 130 kilometatra andrefan'ny Budapest, tena akaiky ny sisintany miaraka amin'i Slovakia. Manakaiky kokoa izany Bratislava, Renivohitra Slovak (70 kilometatra) noho ny renivohitra Hongroà mihitsy.
Tanàna izay manana tranobe Baroque mahaliana vitsivitsy. Ny ivony manan-tantara dia miitatra manamorona ny Reniranon'i Raba, reniranon'i Danube. Ny fitsangatsanganana amoron'ny morony dia hahitanao anao, miorina eo an-tampon'ny havoana iray, ny Tranon'i Bishop. Tena tsy foibe ara-tantara lehibe io, ka azo zahana an-tongotra tsara.
Handalo ny Szechenyi Ter, ny kianja lehibe misy ny tanàna ary toerana fihaonana marina ho an'ireo mpizahatany sy ny mponina. Manomboka eto dia manomboka ny arabe sy kianja kely maro izay mitondra anao mankany amin'ny trano mimanda. Ny tsara indrindra dia ny mpandeha an-tongotra ny foibe manan-tantara manontolo, ka tena ahazoana aina ny fitsidihana.
Ity kianja lehibe ity dia manolotra eo afovoany ilay malaza Tsanganana an'ny Virjiny Masina ary ny Fiangonan'i San Ignacio. Niorina tamin'ny 1641 tamin'ny fomba Baroque, raha ny tsiriko dia tsy isalasalana fa ity no fiangonana tsara indrindra eto an-tanàna.
Alao an-tsaina ny tanàna Baroque mahazatra, miaraka amin'ireo trano miloko pastel manaitra, ny ankamaroan'izy ireo dia naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Raha tonga amin'ny lamasinina ianao, raha vantany vao miala ny gara ianao dia hahita izany Kianja Varoshaza, izay misy ny Lapan'ny tanàna mamirapiratra, izay, amin'ny alina, manazava tanteraka, dia mahagaga. Izy io dia natsangana tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fomba neo-baroque.
Lafiny lehibe iray hafa manasongadina momba an'i Gyor ny tanàna iray izay voatahiry tsara, izay mandehandeha mamaky azy io dia mitondra antsika hiverina amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo.
Angamba ora vitsivitsy dia ampy hahafantarana sy hitsidihana ny tanàna. Raha mitsidika an'i Eoropa Atsinanana ianao dia tadidio ny Gyor, zoro tsara tarehy izay hitadidinao fahatsiarovana tsara.
Sary Via Wikipedia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Hongria » Gyor, tanànan'ny baroika any Hongria
Katedraly Exeter any Angletera
Ny riandrano mirotsaka amin'ny lohasaha Mitla, any Mexico